Doodda Badda: Afar qodob oo qareenada Somaliya ay diiradda saareen | Dhacdo
Home Wararka Maanta Doodda Badda: Afar qodob oo qareenada Somaliya ay diiradda saareen
Doodda Badda: Afar qodob oo qareenada Somaliya ay diiradda saareen
Waxaa shalay magaalada Hague ee dalka Holland ka bilaabmay dhageysiga dacwada muranka badda ee u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya.
Qareennada matalaya Soomaaliya ayaa shalay gudbiyay qaar ka mid ah doodahooda ku aadan muranka badda.
Dowladda Kenya ayaa horay u shaacisay in aysan ka qeyb gali doonin dhageysiga dacwada ee shalay ka bilaabatay maxkamada Cadaaladda Caalamiga ee ICJ.
Waxay dalbatay in 30-daqiiqo oo furitaanka ah la siiyo, balse waa laga diiday sida ay wararka sheegayaan.
Isfahankii 2009-kii (MOU)
Mid ka mid ah qareennada Soomaaliya, Philippe Sands, oo Shuruucda caalamiga ah ka dhiga University College London, ayaa qodobkan ku billaabay, wuxuuna sheegay in isfahankii ay labada dal kala saxiixdeen sannadkii 2009-kii, uusan wax khilaaf ah ku ahayn dacwadda.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo maanta qaatay tallaalka xanuunka COVID-19
Next articleMaxaad ka taqaannaa qareenada Somaliya ku metelaya dacwadda badda?